Mpanamboatra sy mpamatsy harato ambongadiny | Ondry telo
Pea sy Bean Netting dia esorina ao anaty harato polyethylene harato, tohana ho an'ny tsaramaso mpihazakazaka, pitipoà, pitipoà mamy ary zavamaniry miakatra hafa - miaraka amin'ny tsaramaso mpihazakazaka manokana mandray soa avy amin'ny harato rehefa rakotra rindrina.
Vita amin'ny PE, ny harato dia afaka manolo ny harato vy, ny vy ary ny fitaovana simba. Izy io dia mateza, maivana nefa matanjaka ary azo ampiasaina indray avy amin'ny vanim-potoana iray mankany amin'ny manaraka, mora apetraka ary mahatohitra ny reagents ivelany.
√ Ity harato ity dia manampy amin'ny fanohanana ireo zavamaniry mananika vaovao eo am-piandohan'ny fitomboana.
√ Ireo zoro efatra dia azo amboarina, izay mety hapetraka, azo ampiasaina ary azo ampiasaina ..
√ Ny haben'ny harato lehibe dia ahafahanao mamboly zavamaniry tsara tarehy sy mioty legioma rehetra nefa tsy mikorontana na miraikitra. Izy io dia manohana voanjo, voatabia, voaloboka ary voanjo ..
√ Tena mety amin'ny voaloboka, legioma, voankazo ary voninkazo, toy ny loofah faka, voaloboka, mpampitohy voaloboka, honeysuckle, kôkômbra, sns
Isa isa Size Haben'ny haben'ny
Teo aloha: Lolo netting
Manaraka: Gutter Guard Mesh